Mudug: Boqolaal qoys oo colaad uga soo barakacay deegaanno hoostaga Hobyo oo gaaray Wisil - Radio Ergo
(ERGO) – In ka badan 700 qoys oo ka soo barakacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Alshabaab ayaa asbuucii hore gaaray tuulada Wisil oo hoos tagta degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Qoysaskan oo xoolo dhaqato ah ayaa degganaa deegaanada kala ah Cimaamad, Gaadey iyo Shabellow oo Hobyo ka tirsan. qoyska Ahmed Cilmi Maxamuud oo ah aabaha 10 carruur ah ayaa kamid ah qoysaskan oo hadda ku nool deegaanka Jaho oo Wisil u jira illaa 10km.
Ahmed oo qadka taleefoonka kula hadlay Radio Ergo ayaa sheegay in degaanka ay ku haysato hoy la’aan, cunno yari iyo helitaanka biyaha oo ku adag. fuustada biyaha ah ayuu tilmaamay in ay ku iibsadaan $4 illaa $5.
Lix neef oo ka tirsan Ari afartan ah oo deegaanka uu la yimid ayuu iibiyay si uu biyo ugu helo xoolaha uu dhaqdo iyo qoyskiisa. Ariga oo caato ah awgeed $20 ayaa looga iibsaday neefkii ugu lacgta badnaa, sida uu sheegay.
“Arigii ayaa laysku gadaa oo wax ka soo baxayo la arag. waxii markii aad labo kal cabto ayaa laysku jamleeyaa toban dollar lagaa qaadayaa.”
Qoyskiisa ayuu tilmaamay inuu deggan yahay aqal cooshad ah oo ku yaalla dhul bannaan oo cadceeddu kulushahay. Bariis iyo Sonkor 25kg ah oo ay ku iibsadeen neef ay gateen ayuu sheegay inuu gabaabsi ka yahay.
Waxaa toban beri ka hor gaajo iyo harraad uga dhintay Ari 11 neef ah. reerka ayuuna sheegay in wixii intaa ka dambeeyay ay bilaabeen qalashada xoolaha tabarta daran ee aan la heyn dhaqasho iyo iib.
“Afartan neef baa Ari ka la heyn, hadda labaatan baa ka joogta. neef aan socon karin marbaa la jiidaahoo ilmihii wax looga raadiyaa. wax beec ahna majiraan oo malahan.”
Shan cesho ayey ku qaadatay qoyska Axmed oo ka soo barakacay tuulada Shabeellow in halkan ay soo gaareen. waxa ay ku soo guureen Rati ay ku soo qaateen biyaha iyo agabka guriga.
Waddada ayuu sheegay in uu ku soo arkay qoysas badan oo aan haysan Awr iyo gaadiid kale oo ay ku guuraan. kuwaas oo ku qasbanaaday in masaafo 70km ah ay soo lugeysiiyaan carruur, waayeel iyo xoolo tabar daran.
“Waddada waxaan ku soo aragnay dad garabka ku guuraya oo harraad uga caddahay, oo hadba meel iska fariisanayoo ilmihii iska ooyayaan. say usoo socdeen bay habqan ku yimaadeen.”
Qoyska Asli Maxamuud Sabriye oo ah hooyo haysata 10 carruur ah, kuna noolaa tuulada Cimmaamad ayaa kamid ah qoysaska ka soo barakacay colaadda. Radio Ergo ayey u sheegtay in deg deg ay ku soo baxeen oo aysan soo qaadan, raashiin, dhar iyo agab kale toonna. Iyagoo wata Ari 15 neef ah ayey sheegtay in ay soo lugeynayeen muddo asbuuc ah.
Neef ay qasheen iyo cunno ay ku caawiween qoysas ay waddada isla soo mareen ayey sheegtay in ay uga soo gudbeen masaafo 50km ah.
“Wax alaab la yiraa, hal caag oo biyo ku soo qaadanay yaa laga arkay. markaan meel dhexe mareyno, cid ayaa kirli nasiiday, cidna digsiyeey nasiiday. haddana howd cidllo ah baa isaga nool nahay.”
Asli Maxamuud ayaa intaa ku dartay in aysan hoy laheyn oo habeenkii ay seexdaan bannaanka, maalinkiina ay geedaha waa weyn hoos fariistaan. biyaha oo lacag ah ayey sheegtay in aysan iibsan Karin oo ay ku caawiyaan qoysaska deggan deegaanka. Bariis 25kg ah oo ay ku iibsadeen lacagta neef Ari ah oo ay gateen ayey tilmaantay in maalinkii hal mar ay karsadaan.
“Ilmaha inta afka wax loo galsho ayey dadka waaweyn iska seexdaan. wax noo dhisan ma jiraan. Saddex maro oo anigu sitay oo baati ah aan ilmaha qaar la huwdaa, qaarna aabahoodbaa baalka galiya oo go’iisa la huwdaan.”
Maamulka tuulada Wisil ayaa sheegay in qoysaska ku soo barakacay ay ku soo beegmeen xilli jiilaal ah oo ay adagtahay helitaanka biyaha. dhulkuna yahay mid uu Ayax horey u xaalufiyay beerihii iyo daaqii uu lahaa.
Xoghayaha maamulka Wasil Yoonis Abshir Daleel ayaa sheegay in maamulku uu sameeyay waxa kaliya ee uu awoodi karay oo ah wacyi galin uu bulshada martida loo yahay u sameeyay, si looga hortago khilaaf dhexmara dadka deegaanka iyo qoysaska soo barakacay.
“Annaga ammaan ahaan inaan ilaalinno oo yacni wax dhiba aan la gaarsiin dadkaas ayaan awoodnaa. xaqiiqda dadkaas wax annagu u awoodno degmo Wasil ahaan ma jidho.”
Biyaha laga cabo deegaanka Wisil ayaa ah xaareed barkado ku keydsan oo shaqsiyaad gaar ah ay lee yihiin, waxaana fuustadii lagu iibsadaa $4 illaa $5. halka biyaha kale ay yihiin kuwo dhanaan oo laga helo ceel biyoodka Wisil. badanaa dadku ma cabaan maadaama ay qaraar yihiin. Lacag illaa $10 ah ayaana laga qaadaa qoys kasta oo xooluhu uga waraabaan.